काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) निर्वाचनमा पार्टीबाट बल्लतल्ल टिकट प्राप्त गरेका महिलाको अधिकांश प्रतिस्पर्धा बलियो प्रतिस्पर्धीसित हुँदैछ । न्यून सङ्ख्याको महिला उम्मेदवारी र कडा प्रतिस्पर्धाले प्रत्यक्षबाट महिला विजय हुने सङ्ख्या झनै न्यून हुने सम्भावना देखिएको छ ।
तीमध्ये सुनसरी ३ मा वाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार भगवती चौधरी एक हुनुहुन्छ । चौधरीको फोरम लोकतान्त्रिकबाट काँग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएका विजयकुमार गच्छदारसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेता गच्छदार अहिले उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट गच्छदारसँग ३६५ मतले मात्रै पराजित चौधरीले यस पटक वाम गठबन्धन भएकाले आफूले भारी मतले जित्ने दाबी गर्नुहुन्छ तर नेपाली काँग्रेसमा पर्किएपछि नेता गच्छदारको पनि पुरानो मताधार फर्किएको विश्वास गच्छदार निकटहरू बताउनुहुन्छ । यस्तै, उदयपुर १ मा एमालेकै तर्फबाट वाम गठबन्धनको उम्मेदवार मञ्जुकुमारी चौधरीले नेपाली काँंग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । खड्का संविधान सभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट विजयी हुनुभएको थियो । यस्तै स्याङ्जा २ मा वामगठबन्धनको तर्फबाट एमालेकी उम्मेदवार पद्माकुमारी अर्यालले उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता रहनुभएकी पम्फा भुसालले ललितपुर ३ मा नेपाली काँग्रेसका मदनबहादुर अमात्यलाई टक्कर दिँदै हुनुहुन्छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीलाई भारी मतले पराजित गर्न सफल अमात्यसँग वाम गठबन्धनको तर्फबाट भुसाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएको हो । बाग्लुङ १ बाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार चम्पादेवी खड्काले वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका एमालेका सूर्यप्रसाद पाठकलाई टक्कर दिइरहनु भएको छ ।
कैलाली ५ मा काँग्रेसबाट डा. आरजु राणाले वाम गठबन्धनका तर्फबाट (एमाले) का नारदमुनि रानासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । यस्तै कैलाली १ मा काँग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने र एमालेकै मदनकुमारी शाहबीच प्रतिस्पर्धा छ । माओवादीका तर्फबाट वाम गठबन्धनको उम्मेदवार उर्मिला अर्यालले पर्सा ४ मा नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश रिजाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई टक्कर दिइरहनुभएको छ ।
यस्तै, माओवादीबाट कञ्चनपुर १ मा उम्मेदवार बन्नुभएकी विना मगर काँग्रेसका दिवानसिंह विष्टलाई टक्कर दिइरहनु भएको छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट विष्टसँग हारेकी मगर यस पटक वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यसैगरी रुकुम (पूर्व)बाट उम्मेदवार कमला रोका काँग्रेसका शशीशङ्कर रोका मगरसँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
खोटाङबाट काँग्रेसका उम्मेदवार सरस्वती बजिमय वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमालेका उम्मेदवार विशाल भट्टराईसँग कडा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । तेह्रथुममा काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले संविधान सभामा निर्वाचित एमालेका भवानी खापुङलाई टक्कर दिइरहनु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा काँग्रेसका १५४ उम्मेदवारमध्ये नौ जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । यस्तै, नेकपा एमालेका १०३ मध्ये पाँच जना, नेकपा
(माओवादी केन्द्र) का ६० उम्मेदवारमध्ये चार जना महिला उम्मेदवार छन् । राप्रपाका छ र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का पाँचमध्ये महिला उम्मेदवार शून्य छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टीबाट १२३ मध्ये तीन जना महिला, सङ्घीय समाजवादी फोरमका १०७ मध्ये चार जना महिला, राजपाका ६५ मध्ये छ जना महिला उम्मेदवार तथा अन्य साना दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चाले नौ, एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ८÷८ र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले छ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ९५ वटा दल र स्वतन्त्र गरी एक हजार ९४५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । २७ वटा पार्टीका १४६ जना महिलाले उम्मेदवारी दिने अवसर पाउनुभएको छ ।
प्रमुख दलले महिला उम्मेदवार उठाएको अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षी दलका प्रभावशाली उम्मेदवार वा विपक्षी पार्टीको पकड क्षेत्र हुने गरेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धामा महिला उम्मेदवारलाई सहज जित हात पार्न कठिन देखिन्छ । प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व कानुनले अनिवार्य गरे पनि अधिकांश दलले सात प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । प्रमुख दलले उम्मेदवार बनाएका महिलालाई सुरक्षित क्षेत्र पनि दिइएको छैन ।